यी OnePlus X को प्राविधिक विशेषताहरु हुन् Androidsis
त्यहाँ OnePlus X लाई प्रकाश हेर्न को लागी कम बाँकी छ। यो आशा गरिन्छ कि भोलि, अक्टोबर २,, वनप्लसले आफ्नो नयाँ फोन प्रस्तुत गर्नेछ। तापनि पछिल्लो चुहावट पछि, जो सबै संग पोस्टर देखाउँछ OnePlus X को प्राविधिक विशेषताहरु, त्यहाँ देखाउन को लागी थोरै बाँकी छ।
1 OnePlus X को सबै प्राविधिक विशेषताहरु फिल्टर गरीएको छ
2 कुन मूल्यमा वनप्लस एक्स यूरोपमा आउनेछ?
OnePlus X को सबै प्राविधिक विशेषताहरु फिल्टर गरीएको छ
अहिले सम्म हामी मात्र चीन मा यसको आधिकारिक मूल्य थाहा थियो, २240० यूरो बदल्नका लागि, एक लीक पोस्टर को लागी धन्यवाद। अब पोस्टर को एक नयाँ श्रृंखला हामीलाई नयाँ OnePlus X फोन को सबै प्राविधिक विशेषताहरु देखाउँछ। र होइन, हामी आश्चर्यचकित हुने छैनौं।
अपेक्षित रूपमा, वनप्लस एक्स मा एक5इन्च प्यानल को एक स्क्रीन हो कि 1920 x 1080 पिक्सेल को रिजोलुसन सम्म पुग्नेछ, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास सुरक्षा को अतिरिक्त। हुड मुनि हामी एक प्रोसेसर भेट्टाउनेछौं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801२, एक एसओसी जुन २०१४ मा धेरैजसो फ्ल्यागशिपहरु द्वारा प्रयोग गरीएको थियो, त्यसैले जब यो साँचो हो कि यो पुरानो प्रोसेसर हो, यसको प्रदर्शन क्षेत्र को मध्य-माथिल्लो दायरा मा यो फोन को प्रशंसा गर्न को लागी पर्याप्त भन्दा बढी छ।
यो प्रोसेसर मा हामी जोड्नु पर्छ १ जीबी र्याम मेमोरी दुई भण्डारण विन्यास संग, १ GB जीबी वा ३२ जीबी आन्तरिक मेमोरी संग, यसको माइक्रो एसडी कार्ड स्लट को माध्यम बाट विस्तार योग्य।
यसको मुख्य क्यामेरा पनि पुष्टि गरीएको छ, एक द्वारा बनाईएको १० me मेगापिक्सेल लेन्स हामी यसको अगाडिको क्यामेरा को बारे मा केहि थाहा छैन, यद्यपि हामी गुणस्तरीय आत्म-चित्र वा सेल्फी लिन को लागी एक 5-8 मेगापिक्सेल लेन्स को लागी धन्यवाद को आशा गर्न सक्छौं।
हामी भोलि सम्म पर्खनु पर्छ यो पुष्टि गर्न को लागी कि यी प्राविधिक विशेषताहरु सही छन्, यद्यपि पोस्टर मा हेर्दै, मलाई लाग्दैन कि यो नक्कली हो। अब हाम्रो लागि के साँच्चै मामिला छ यो OnePlus X को मूल्य हुनेछ।
कुन मूल्यमा वनप्लस एक्स यूरोपमा आउनेछ?
मेरो विचारमा OnePlus X को अन्तिम मूल्य के हो यसको सफलता को चिन्ह लगाउनेछ। यदि यो लगभग 250 यूरो को एक मूल्य मा यूरोपीयन बजार पुग्छ, म पक्का छु यो एक बिक्री सफलता हुनेछ। यस्तो आकर्षक मूल्य मा उच्च अन्त सुविधाहरु संग एक फोन? प्रयोगकर्ताहरु को विशाल बहुमत को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प।
समस्या आउँछ यदि अन्तमा OnePlus X नेक्सस 5X र 6P संग गुगल मनपर्छ र मूल्य 100-150 यूरो उठाउँछ। यस अवस्थामा, यो मूल्य को लागी एक OnePlus X किन्ने, विशेष गरी यदि हामी ध्यानमा राख्छौं कि यदि तपाइँ टर्मिनल संग कुनै समस्या छ भने तपाइँ यसलाई चीन मा मर्मत को लागी पठाउनुहुन्छ, यो एक पूर्ण गल्ती हुनेछ।
अब हामी मात्र आधिकारिक प्रस्तुतीकरण को लागी पर्खनु पर्छ र हाम्रा औंलाहरु पार गर्नु पर्छ ताकि वनप्लस मा केटाहरु यस सन्दर्भमा गल्ती नगर्नुहोस्। तिम्रो के बिचार छ? के तपाइँलाई लाग्छ कि वनप्लस एक्स ३०० यूरो भन्दा कम खर्च हुनेछ जब यो बजारमा आउँछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » OnePlus » वनप्लस एक्स का सबै स्पेसिफिकेसनहरू यसको प्रस्तुतिको एक दिन पछि फिल्टर गरिन्छ
OnePlus चीन मर्मत को लागी पठाइएको छैन, तर युनाइटेड किंगडम।
फ्रुटरिएपलाई जवाफ दिनुहोस्
Huawei Mate 8 नोभेम्बर on मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ
चाँडै नै तपाईं Google प्ले खेलहरूबाट आफ्ना खेलहरू रेकर्ड र साझेदारी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ